महामारीको श्रृङ्खला : पछिल्लो २०० वर्षमा कतिको ज्यान गयो ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/महामारीको श्रृङ्खला : पछिल्लो २०० वर्षमा कतिको ज्यान गयो ?
बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई ‘महामारी’ को रुपमा घोषणा गर्‍यो । झण्डै ४ हजार जनाको मृत्यु भएको र १०० बढी मुलुकलाई प्रभावित गराएको संगठनको घोषणामाथि पनि आलोचना नै नभएको भने होइन । सन् २००९ को महामारी घोषणा गर्ने समयदेखि नै आलोचना गर्दै आएका केही समूहले अनावश्यक आतंक सिर्जना गराएको आरोप लगाएको छ ।
तर संगठनले महामारीको घोषणा गर्दै विश्व समुदायलाई यसमा सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।फेब्रुअरीको अन्तिम साता विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाका कारण विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको थियो । र, कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ‘महामारी’ भन्ने शब्दले परिभाषित गर्न बारम्बार रोक्दै आएको थियो ।
तर बुधबार स्वास्थ्य संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना भाइरसलाई महामारीको रुपमा परिभाषित गर्‍यो । संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अडानोम घबेरियससले १०० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएर एक लाख २० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमित भएको यो भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरेका हुन् ।
महामारी के हो ? महामारी भन्ने शब्द प्यानडेमिक ग्रीक शब्द प्यान र डेमोसबाट बनेको हो, जसको अर्थ प्यान अर्थात् सबै र व्यक्ति गरी सबै व्यक्तिमा फैलिएको भन्ने अर्थ हुन्छ । यही शब्दबाट आएको महामारीले पनि एकै समयमा धेरै देश र महादेशमा फैलिएको रोग भन्ने अर्थलाई बोकेको हुन्छ । यो शब्द विशेषगरी रोग विशेषज्ञहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो । सामान्यतया रोकिन सक्ने भएसम्म यसलाई महामारीको रुपमा घोषणा नगर्ने भएकोले नै पनि लामो समयसम्म यस्ता रोगहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गर्न इन्कार गर्ने गरेको छ ।
महामारीको श्रृङ्खला : पछिल्लो २०० वर्षमा कतिको ज्यान गयो ?महामारीको श्रृङ्खलालाई हेर्दा यसको सुरुवात निकै पहिलेदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । तल उल्लेख गरिएकाहरु मध्ये केहीलाई विश्वस्वास्थ्य संगठनले महामारीको रुपमा घोषणा नगरेको भएपनि त्यसमा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् । जुन ज्यान जानेको संख्यालाई हेर्दा अहिलेको कोरोनामा ज्यान गुमाउनेको भन्दा निकै धेरै मानिन्छ । पछिल्लो २०० वर्षको महामारीको श्रृङ्खलालाई हेर्दा करोडौं मानिसहरुले ज्यान गुमाएको विजिनेस इन्साइडरले जनाएको छ ।
स्पेनिस फ्लू, एचवनएनवन (१९१८-१९१९)
सन् १९१८ देखि सुरुभएको र एक वर्षसम्म चलेको यो महामारीको क्रममा झण्डै ५० करोड मानिसलाई यसले प्रभावित गराएको थियो । जसमध्ये विश्वभरी ५ करोड मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।
हङकङ फ्लु वा एच३एन२ (१९६८-१९७०)
स्पेनिस फ्लुको संकटको ५० वर्षपछि अर्काे भाइरस हङकङ फ्लु सुरु भयो । जसबाट विश्वभरीमा झण्डै १० लाख मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ ।
एचआईभी एड्स -१९८१(हालसम्म)
पहिलो पटक यसको बारेमा जानकारी प्राप्त भएकोमा यस रोगबाट ३ करोड २० लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्वाइन फ्लु एचवान एनवान (२००९-२०१०)
महामारीको मापन गर्ने धेरै मापनहरु हुन्छ । यसको कुनै थ्रेस होल्ड छैन । यसमा कुनैपनि मृत्यु वा फैलावटलाई मात्रै आधार मान्ने गरिँदैन । विगतका उदाहरणहरूलाई हेर्दा एचआईभी, स्वाइन फ्लू र सन् १९१८ मा स्पेनिश फ्लू सामेल छन् । इतिहासकै सबैभन्दा घातक महामारीको रुपमा रहेको छ ब्ल्याक डेथ । युरोपमा सन् १३४८-५० सम्ममा फैलिएको सो महामारीले २० करोड मान्छे मरेका थिए ।